प्रकाश दाहालको मृत्यु ‘सुतेकै ठाउँमा’ ! (अपडेट-२ ) – HamroSamrachana
हाम्रो संरचना । ३ मंसिर २०७४, आईतवार ११:१८
३ मंंसिर नेपालगञ्ज/ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पुत्र प्रकाश दाहालको अस्पताल पु–याउनु भन्दा पहिल्ये नै मृत्यु भएको नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलले जनाएको छ ।
हस्पिटलका अनुसार प्रकाशलाई आइतबार बिहान ५:५० मा अस्पतालको इमर्जेन्सीमा ल्याइएको थियो । अस्पताल ल्याईपु–याउदा उनको शरीरमा जीवनको कुनै संकेत थिएन । शरीर चिसो थियो । आँखाको नानी खुलीसकेको थियो । चिकित्सकले उतिखेर नै मृत घोषणा गरेका थिए ।
मृत्युको कारण खुलाइएको छैन । प्रकाशलाई बिहान साढे ५ बजे उनका दुई सहयोगीले अस्पताल ल्याइपुर्‍याएको अस्पतालले जनाएको छ ।
प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहालको मृत्यु लाजिम्पाटस्थित आफ्नो निवासमा सुतेकै ठाउँमा भएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको छ ।
तीन दिनयता आफू केही अस्वस्थ भएको बताउँदै आएका प्रकाश दाहाल प्रचण्ड झापातिर लागेपछि त्यता नगइनकन चितवनबाट काठमाडौं फर्किएका थिए । उनी शनिबार राति लाजिम्पाटस्थित निवासमै सुतेका थिए ।
पारिवारिक स्रोतका अनुसार शनिबार राति ८ बजेतिर प्रकाशले आफूलाई हल्का ज्वरो आइरहेको बताएका थिए । चुनाव लागेका कारण पत्नी विना पनि कञ्चनपुरतिरै थिइन् । घरमा परिवारका अन्य सदस्यहरु खासै थिएनन्. । आमा सीता दाहाल र भाञ्जीहरुमात्रै थिए ।
सामान्य ज्वरो आए पनि प्रकाशले बेलुका आमा र भाञ्जीहरुसँग बसेर खाना खाएको पारिवारिक स्रोतले बतायो । खाना खाएपछि सुत्नका लागि आफ्नो कोठामा पसेका प्रकाशले राति ११ बजेतिर उनले झापातिर एउटा म्यासेज पठाएको उनको मोवाइलबाट देखिएको स्रोतले बतायो ।
प्रकाश दाहाल बिहानै चाँडै उठ्थे । तर, अाइतबार बिहान चाँडो नउठेपछि आमा सीता दाहाल कोठामा पसिन् र उठाउन खोज्दा चलमल नगरेपछि हातले घच्घच्याइन् ।
छोरो अचेत अवस्थामा देखेपछि आमाले हतार-हतार सन्तु दराई (परवाना) लाई बोलाइन् । त्यहाँबाट गाडीमा हालेर नर्भिक अस्पतालमा पुर्‍याउँदा बिहानको करिब पौने ६ बजिसकेको थियो । त्यसबेलासम्म उनको मृत्यु भइसकेको थियो ।
पारिवारिक स्रोतका अनुसार सुतेकै ठाउँमा प्रकाशको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भए पनि अस्पतालले उनको मृत्युको कारणबारे औपचारिक जानकारी दिन बाँकी छ । अबको केही बेरमा उनको मृत्युबारे अस्पतालले पत्रकार सम्मेलन गरेर औपचारिक जानकारी दिने तयारी गरिरहेको छ ।
मंगलबार सम्म नेपालमा १७ हजारमा कोरोना संक्रमण
तस्करीको करोड मुल्यका मोबाईल छोडन आदेश दिने दांगका डिआइजी मुकुन्द राज आर्चायका कारण बर्दघाटका इन्सपेक्टर कपिल वाग्लेको मृत्यु !